လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(30)ခန့်ကဓာတ်ပုံထဲကသူတွေကို ပြန်ပြီးခြေရာခံကြည့်တဲ့အခါ - CantWait2Say
General knowledge January 1, 2018
အင်္ဂလန်ကChris Porszလို့ခေါ်တဲ့Street Photographerတစ်ယောက်ဟာ 1970နဲ့80ကြားကာလတွေမှာ လမ်းမပေါ်ကဘဝပေါင်းများစွာသာမက အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အများသူငါမျက်စိတွေကိုဖမ်းစားဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံများစွာကို ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သိပ်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော့ ဒီဓာတ်ပုံဆရာဟာ သူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(30)ကရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ဓာတ်ပုံထဲကလူတွေနဲ့အတူ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(30)ဓာတ်ပုံထဲကနောက်ခံမြင်ကွင်းတွေအတိုင်း မလွဲမသွေပြန်ရိုက်ပြီးဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။သိပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲ ဓာတ်ပုံထဲကသူတွေကိုခြေရာခံပြီး ဒီသိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုကိုချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ။
(1).Railway Kiss(1980 & 2009)
1980တုန်းကတော့ Tonyနဲ့Sallyဆိုတာ Essexမှာအလုပ်လုပ်လုပ်တဲ့ 22နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာလေးနဲ့အစိုးရရုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့21နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးပေါ့။ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာ သူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီစုံတွဲဟာ ဒီလိုအမှတ်တမဲ့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာတောင်မသိပါဘူး။ဒါပေမယ့် နှစ်(30)အကြာမှာ Tonyက သတင်းစာထဲကနေဒီပုံလေးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်မှာပြထားတဲ့ရောင်စုံဓာတ်ပုံလေးကတော့ December2009မှာထပ်မံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆရာ၊ဆရာမအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပြီး Tomနဲ့Jennyလို့ခေါ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အော် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ…!
(2)Punks on the steps(1980 & 2015)
1980ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ John Church,Kim Guest,Gary Wymer,Mirko Obradovic,Ade Lawrence,Sean Adams နဲ့ Mark Winsworth(ဘယ်မှညာ)တို့ဟာ Cathedral Squareရဲ့လှေကားတွေပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ Johnကပန်းချီဆရာနဲ့အလှဆင်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် အမှိုက်ကောက်သမားဖြစ်နေတဲ့Adeနဲ့အတူBandတစ်ခုမှာတီးနေပါသေးတယ်။Garyကတော့သားသတ်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပြီး Mirkoကတော့အုတ်စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။မကြာသေးမီကသူတို့အခုလိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးဟာ ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့Seanနဲ့Kimကိုအမှတ်ရစေပါတယ်။
(3)Waiting for the phone(1981 & 2016)
ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ John Morris,Paul Bernaldနဲ့Andrew Pollardတို့ကတော့ ယခုအချိန်ထိစက်ဘီးနဲ့မြို့ပတ်စီးရင်း သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်တွေကိုအတူဖြတ်သန်းနေဆဲပါ။
(4)Metal Mickey(1980 & 2016)
Metal Mickeyလို့အများကခေါ်ကြတဲ့Steve Orsbornကတော့ 1980တုန်းကဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုတွေကြောင့် ခြေထောက်အကြိမ်ကြိမ်ကျိုးခဲ့သူပါ။ယခုအခါမှာတော့ မယုံနိင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို Steveဟာ လမ်းလျှောက်တုတ်အကူအညီလေးနဲ့တင်လမ်းလျှောက်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်ကျပြီးကလေး4ယောက်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့သားတစ်ယောက်ကတော့2012မှာဆုံးပါးသွားပါတယ်။
(5)Nobby(1980 & 2015)
Nobbyလို့လူသိများကြတဲ့ စကော့တလန်ကMichael Rossကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့1980အစောပိုင်းကာလတွေကသူ့ရဲ့အိမ်မီးလောင်ခဲ့မှုကြောင့် ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွေမှာ အိမ်ခြေမဲ့ဘဝနဲ့10နှစ်နီးပါးနေခဲ့ရပါတယ်။နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေက သူနေထိုင်ဖို့အိမ်တစ်လုံးရှာဖွေပေးခဲ့ပါတယ်။
(6)Dog & Tina(1985 & 2015)
ဒီပုံလေးကိုတော့Tinaနဲ့Dogတို့က Tina18နှစ်အရွယ်တုန်းက Cathedral Churchနားမှာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Tinaကအခုချိန်မှာDorsetမှာနေပြီး ရက်ကန်းအလုပ်ရုံပေါင်းများစွာကဖွင့်လှစ်ထားသလို Dogကတော့Walesမှာနေထိုင်ပြီး ခြံစည်းရိုးကာ၊ပန်းခြံစိုက်တဲ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ 1985တုန်းကနှစ်ယောက်အတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ပြီး Tinaက”ဒီပုံရိုက်ခဲ့တုန်းကသိပ်ပြီးလန်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်သတိရစေပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တော်တော်ကြာအောင် ပန့်ခ်ကေမျိုးစုံထားဖြစ်ခဲ့တယ်”လို့ပြောခဲ့သလို Dogကတော့”သိပ်ကိုပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေပါ” လို့ဖြည့်စွက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
<ကိုယ်တိုင် ဒီစာစုလေးကိုဖတ်ပြီး ရင်ထဲတစ်မျိုးတမည်ခံစားခဲ့ရလို့ ပြန်လည်ဘာသာပြန်ဝေမျှပေးလိုက်တာပါ။တစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးဖတ်ပြီးကြည်နူးလိုက်၊နောက်တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်၊လွမ်းဆွတ်စရာဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့ ဖတ်မိလိုက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာကို အလှည့်အပြောင်းများတဲ့ဘဝတွေအဝေးကြီးကို သူတို့နဲ့အတူဖြတ်လျှောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မက ကိုယ့်ဘေးမှာရှိနေစဉ်တန်ဖိုးထားသင့်တဲ့သူတွေကို ဒီ့ထက်အချိန်ပေး၊ပိုတန်ဖိုးထားတတ်စေဖို့လည်းmessageတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်…>
အင်ျဂလနျကChris Porszလို့ချေါတဲ့Street Photographerတဈယောကျဟာ 1970နဲ့80ကွားကာလတှမှော လမျးမပျေါကဘဝပေါငျးမြားစှာသာမက အထူးသဖွငျ့လူငယျတှကေိုကိုယျစားပွုတဲ့ အမြားသူငါမကျြစိတှကေိုဖမျးစားဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ဓာတျပုံမြားစှာကို ခေါငျးစဉျအမြိုးမြိုးနဲ့ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့သိပျမကွာခငျကာလတှမှောတော့ ဒီဓာတျပုံဆရာဟာ သူလှနျခဲ့တဲ့နှဈ(30)ကရိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ဓာတျပုံထဲကလူတှနေဲ့အတူ လှနျခဲ့တဲ့နှဈ(30)ဓာတျပုံထဲကနောကျခံမွငျကှငျးတှအေတိုငျး မလှဲမသှပွေနျရိုကျပွီးဖနျတီးဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။သိပျကိုစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့စိတျကူးလေးပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲ ဓာတျပုံထဲကသူတှကေိုခွရောခံပွီး ဒီသိပျကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့အနုပညာဖနျတီးမှုတဈခုကိုခပြွနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ။
1980တုနျးကတော့ Tonyနဲ့Sallyဆိုတာ Essexမှာအလုပျလုပျလုပျတဲ့ 22နှဈအရှယျကြောငျးဆရာလေးနဲ့အစိုးရရုံးမှာအလုပျလုပျတဲ့21နှဈအရှယျကောငျမလေးပေါ့။ဒီလိုနဲ့တဈနှဈအကွာမှာ သူတို့လကျထပျဖွဈခဲ့ကွတယျ။ဒီစုံတှဲဟာ ဒီလိုအမှတျတမဲ့ဓာတျပုံအရိုကျခံခဲ့ရတယျဆိုတာတောငျမသိပါဘူး။ဒါပမေယျ့ နှဈ(30)အကွာမှာ Tonyက သတငျးစာထဲကနဒေီပုံလေးကိုတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ညာဘကျမှာပွထားတဲ့ရောငျစုံဓာတျပုံလေးကတော့ December2009မှာထပျမံရိုကျကူးခဲ့တဲ့ပုံဖွဈပါတယျ။ဒီပုံလေးကိုပွနျလညျရိုကျကူးတဲ့အခြိနျမှာတော့ သူတို့နှဈယောကျစလုံးဆရာ၊ဆရာမအဖွဈလုပျကိုငျနပွေီး Tomနဲ့Jennyလို့ချေါတဲ့ကလေးနှဈယောကျကိုပိုငျဆိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။အျော ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျလိုပါပဲ…!
1980ခုနှဈအစောပိုငျးကာလတှမှော John Church,Kim Guest,Gary Wymer,Mirko Obradovic,Ade Lawrence,Sean Adams နဲ့ Mark Winsworth(ဘယျမှညာ)တို့ဟာ Cathedral Squareရဲ့လှကေားတှပေျေါမှာထိုငျပွီး ဓာတျပုံအရိုကျခံခဲ့ပါတယျ။ယနမှေ့ာတော့ Johnကပနျးခြီဆရာနဲ့အလှဆငျသူအဖွဈလုပျကိုငျနတေဲ့အပွငျ အမှိုကျကောကျသမားဖွဈနတေဲ့Adeနဲ့အတူBandတဈခုမှာတီးနပေါသေးတယျ။Garyကတော့သားသတျသမားအဖွဈလုပျကိုငျနပွေီး Mirkoကတော့အုတျစကျရုံမှာအလုပျလုပျနပေါတယျ။မကွာသေးမီကသူတို့အခုလိုပွနျလညျပေါငျးစညျးပွီးရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဒီဓာတျပုံလေးဟာ ဆုံးပါးသှားပွီဖွဈတဲ့Seanနဲ့Kimကိုအမှတျရစပေါတယျ။
ကြောငျးနဖေကျသူငယျခငျြးတှဖွေဈကွတဲ့ John Morris,Paul Bernaldနဲ့Andrew Pollardတို့ကတော့ ယခုအခြိနျထိစကျဘီးနဲ့မွို့ပတျစီးရငျး သူတို့ရဲ့အားလပျရကျတှကေိုအတူဖွတျသနျးနဆေဲပါ။
Metal Mickeyလို့အမြားကချေါကွတဲ့Steve Orsbornကတော့ 1980တုနျးကဆိုငျကယျမတျောတဆမှုတှကွေောငျ့ ခွထေောကျအကွိမျကွိမျကြိုးခဲ့သူပါ။ယခုအခါမှာတော့ မယုံနိငျစရာကောငျးလောကျအောငျကို Steveဟာ လမျးလြှောကျတုတျအကူအညီလေးနဲ့တငျလမျးလြှောကျနနေိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ အိမျထောငျကပြွီးကလေး4ယောကျကိုပါပိုငျဆိုငျထားပွီဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သူ့သားတဈယောကျကတော့2012မှာဆုံးပါးသှားပါတယျ။
Nobbyလို့လူသိမြားကွတဲ့ စကော့တလနျကMichael Rossကတော့ လှနျခဲ့တဲ့1980အစောပိုငျးကာလတှကေသူ့ရဲ့အိမျမီးလောငျခဲ့မှုကွောငျ့ ဘတျဈကားဂိတျတှမှော အိမျခွမေဲ့ဘဝနဲ့10နှဈနီးပါးနခေဲ့ရပါတယျ။နှဈအနညျးငယျကွာပွီးနောကျမှာတော့ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးတှကေ သူနထေိုငျဖို့အိမျတဈလုံးရှာဖှပေေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံလေးကိုတော့Tinaနဲ့Dogတို့က Tina18နှဈအရှယျတုနျးက Cathedral Churchနားမှာရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။TinaကအခုခြိနျမှာDorsetမှာနပွေီး ရကျကနျးအလုပျရုံပေါငျးမြားစှာကဖှငျ့လှဈထားသလို Dogကတော့Walesမှာနထေိုငျပွီး ခွံစညျးရိုးကာ၊ပနျးခွံစိုကျတဲ့လုပျငနျး လုပျကိုငျနပေါတယျ။ 1985တုနျးကနှဈယောကျအတူရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဒီပုံကိုကွညျ့ပွီး Tinaက”ဒီပုံရိုကျခဲ့တုနျးကသိပျပွီးလနျထှကျခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေိုပွနျသတိရစပေါတယျ။အဲဒီနောကျပိုငျးနှဈတျောတျောကွာအောငျ ပနျ့ချကမြေိုးစုံထားဖွဈခဲ့တယျ”လို့ပွောခဲ့သလို Dogကတော့”သိပျကိုပြျောစရာကောငျးခဲ့တဲ့အခြိနျတှပေါ” လို့ဖွညျ့စှကျပွောပွခဲ့ပါတယျ။
<ကိုယျတိုငျ ဒီစာစုလေးကိုဖတျပွီး ရငျထဲတဈမြိုးတမညျခံစားခဲ့ရလို့ ပွနျလညျဘာသာပွနျဝမြှေပေးလိုကျတာပါ။တဈယောကျရဲ့အဖွဈအပကျြလေးဖတျပွီးကွညျနူးလိုကျ၊နောကျတဈယောကျရဲ့အကွောငျးလေးဖတျပွီးစိတျမကောငျးဖွဈလိုကျ၊လှမျးဆှတျစရာဇာတျလမျးလေးတှနေဲ့ ဖတျမိလိုကျတဲ့အခြိနျအတှငျးမှာကို အလှညျ့အပွောငျးမြားတဲ့ဘဝတှအေဝေးကွီးကို သူတို့နဲ့အတူဖွတျလြှောကျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ဒါတငျမက ကိုယျ့ဘေးမှာရှိနစေဉျတနျဖိုးထားသငျ့တဲ့သူတှကေို ဒီ့ထကျအခြိနျပေး၊ပိုတနျဖိုးထားတတျစဖေို့လညျးmessageတဈခုရခဲ့ပါတယျ…>
ပျို​မေတို့ နားလည်​မှုလွဲ​နေတဲ့ တစ်​ကိုယ်​ရည်​ ကျန်းမာ​ရေးအယူအဆ ပြသနာ​လေး​တွေ
​လေ့လာမှု​တွေမှာ ပျို​မေတို့ရဲ့ ​လေးဆယ်​ရာခိုင်​နှုန်း​သော အ​ရေအတွက်​ဟာ တစ်​ကိုယ်​ရည်​ ကျန်းမာ​ရေး ထိန်းသိမ်း​စောင့်​​ရှောက်​မှု အ​ကြောင်းကို ​သေချာ အတွင်းကျကျ အမှန်​အတိုင်း မသိကြပါဘူး။ ပါးစပ်​​ပြော နဲ့ အင်​တာနက်​ ကိုပဲ အရမ်းယုံ​နေရင်​ မရပါဘူး။ အန္တရာယ်​ရှိနိုင်​ပါတယ်​။ တစ်​​ယောက်​ကို တ​စ်​​ယောက်​လည်း ဒီအချက်​​လေး​တွေ သတိ​ပေးလိုက်​ကြရ​အောင်​​နော်​။ ပျို​မေတို့ ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ …
ဥရောပရဲ့ ဥပဒေမှာ လက်ထပ်တဲ့အခါ အကြီးအကဲတစ်ဦး အစိုးရ အမှုထမ်းတစ်ဦးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။ဒါဟာ ကိုယ်ယူမယ့် ယောင်္ကျားကို အကြီးအကဲက မဆိုးသွမ်းအောင် ထိန်းချုပ်ပေးဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကြောက်ကာ လင်ယောင်္ကျားက ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်အောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းတွေ့ရင် နိုင်ငံတော်က သူ့အတွက် ဈာပနကို စီစဉ်ပေးရပါတယ်။ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့အတွက် သူ့မျက်နှာလဲ …
ကြာရှည်ထားပြီးမှ စားရင် သင့်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အစားအစာအများ
ပါကင်ပိတ်ကြက်ဥတွေဟာ ငါးရက်ကနေ ခုနှစ်ရက် အပြင် ပိုမကောင်းပါဘူး။တကယ်လို လေလုံတဲ့နေရာမှာ ထားမယ်ဆိုရင်5ပတ်လောက်ထိ ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီး ရေထိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ပုပ်သွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ မယော့နိစ်တွေဟာ အချဉ်ဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို လေမလုံရင် အထားမခံပါဘူး။ မစားသင့်တဲ့ အစားအစာဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ပေါက်ဖွားနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ပိုပွားကာ အစာအိမ်ကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယား …